UN-ka iyo Midowga Yurub oo baaq kasoo saarey dhacdadii Gololey
Dowladda Soomaaliya ayaa amartay baaritaan deg-deg ah oo lagu sameeyo dilka xirfadlayaasha caafimaad.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub oo war-saxaafadeedyo kala duwan soo saarey ayaa baaq deg-deg ah kaso jeediyey dhacdadii degaanka Gololey ee lagu laayey sideedda ruux.
Adam Abdelmoula, ku xigeenka ergayga gaarka ah ee UN-ka u fadhiya Muqdisho, ayaa xoojiyey baaritaan deg-deg ah oo lagu sameeyay falkaas foosha oo uu sheegay in ay cambaareynayo.
Sideedda qof oo shalay meydadkooda laga helay tuuladaas oo 8 KM u jirta degmadda Balcad ayaa todoba kamid ah ahaa xirfadlayaal caafimaad, halka qofka kale uu ahaa mid shacab ah.
"Ficilkan fuleynimada ah kama horjoogsan doono kuwa ka shaqeeya arrimaha bina-aadamnimada howlgalkooda. Halyeeyadan waxay naftooda u hureen sidii ay MCH ugu gaarsiin lahaayeen hooyooyinka iyo carruurta. Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoysaska murugeysan," ayuu ku yiri war-saxaafadeed uu soo saarey diblumaasiga u dhashay Suudaan.
Dhankiisa, Nicolas Berlanga, wakiilka gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, ayaa tilmaamay in uu si xoogan u cambaareynayo "xasuuqaas loo geystay dhalinyarada".
"Bulsho laguma dhisi karo musiibo iyo kala aragti duwanaan ay ku waynayaan kuwa u adeegaya iyaga," ayuu danjiraha hadalkiisa raaciyey.
Marxuumiinta ayaa laga qafaashay degaanka maalin kahor inta aan la helin meydadkooda. Illaa iyo haatan, lama ogga cidda ka dambeysay khaarijintooda, balse waxaa laga faafiyey warar kala duwan.
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka ah ayaa la xiriiriyey Ciidamadda Xoogga. Hase ahaatee, saraakiil u hadlay ciidanka waxay si adag isaga fogeeyeen eedeyntaas.
Wasaaradda Warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in falalka noocaan ah looga bartay kooxaha argagixisada ah ayaa tibaaxday in baaritaan deg-deg ah ay ku sameyn doonan "ficilka argagaxa leh".
Illaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo ku aadan sheegashooyinkaan oo kasoo baxay dhanka xoogaga xiriirka la leh Al-Qaacidda.
Eheladda marxuumiinta oo meydadkooda lagu waramay in laga dejiyey Muqdisho ayaa codsaday in ay cadaalad ku helaan sidda ugu dhaqsiyaha badan, iyagoo dowladda ku tartarsiiyey in ay dedejiso baaritaanka.
Soomaaliya ayaa kamid ah wadamada caalamka ee dilaka shacabka, wariyeyaasha, xirfadlayaasha caafimaadka iyo dadka wax-galka u ah bulshadda ay kula beegsadaan argagixisada iyo kooxo aan la aqoon.
Madaxda DF oo lagu dhaliilay in aysan ka hadlin dil wadareedkii Gololey
Soomaliya 30.05.2020. 11:05
Sideed qof oo todoba kamid ah ahaayeen xirfadlayaal caafimaad ayaa lagu khaarijiyey dhacdadaas.
Puntland oo shaacisay mowqifkeeda baarista dil wadareedkii Gololey
Puntland 02.06.2020. 11:40
Qaabka uu u dhacay dil wadareedkii Gololey oo sharaxaad laga bixiyey
Soomaliya 29.05.2020. 18:30
Meydadka xirfadlayaal caafimaad oo la helay oo lala xiriiriyey ciidanka DF
Soomaliya 28.05.2020. 18:55
Dabley mas'uul dowladeed ku dhex-dishay huteel ku yaala Gaalkacyo
Puntland 18.10.2019. 21:34
Dagaal culus oo ka dhacay duleedka Kismaayo
Soomaliya 27.10.2017. 16:28
Antonio Guterres oo cambareeyay madaafiicdii lagu weeraray Xalane
Soomaliya 14.10.2019. 12:51
Weerar khasaaro geestay oo ka dhacay duleedka Muqdisho
Soomaliya 25.10.2017. 11:31
Somaliland oo bilowday "howlgal qarsoodi ah" kuna goobeyso aqoonsi 05.07.2020. 21:15
HirShabelle oo eedeyn culus u jeedisay madaxda dowladda Soomaaliya 05.07.2020. 20:30
DF oo shixnad agab caafimaad ka guddoontay Midowga Yurub 05.07.2020. 18:00
Duulimaadka Gudaha Soomaaliya oo dib u billowday 05.07.2020. 16:11
Al-Shabaab oo Xildhibaan ku dishay Koonfurta Soomaaliya 05.07.2020. 14:25
Diyaarad laga leeyahay Kenya oo shil ku gashay madaarka Baardheere 05.07.2020. 12:45